Takiana ihany koa ny fangaraharahana sy ny fahalalahan’ny fifidianana, ka tsy hisian’ilay sakantsakana hatao amin’ireo te hirotsaka, izay fantatra amin’ny teny vahiny hoe “ni……ni….”. Hain’ny mpitondra Malagasy tsara ny nisolelaka sy nampandry adrisa tamin’ny filazana fa milamina sy mirindra ny fiainana ara-politika eto Madagasikara. Vokany, nanaiky ny hampindrana volabe mitentina 6,4 miliara dolara ny mpamatsy vola ary nilaza ny fahavononany hampiasa volabe 3,7 miliara dolara ireo orinasa matanjaka. Tsy nierina akory anefa ny volana dia ny fanjakana indray no mihantsy ady amin’ny alalan’ny fisamborana sy fanagadrana ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra aminy, izay porofo mivaingana fa tsy misy akory ny fitoniana politika eto. Kotrehina ihany koa ny lalàna isan-karazany hamotehana sy hisakanana ireo kandida atahoran’ny mpitondra amin’ny fifidianana filoham-pirenena, toy ny lalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena nolaniana maimaika teny amin’ny antenimieram-pirenena, mifono fanilihana fa tsy fampihavanana. Mbola kotrehina ihany koa ny fanaganana ilay fitsarana manokana momba ny heloka ara-ketra sy ara-toekarena teo anelanelan’ny taona 2002-2013, mba hanenjehana manokana ireo mpandraharaha sady mpanao politika atahorana amin’ny fifidianana toa an’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Tsy misy voahaja ny fepetra takiana izay midika fa mety hizotra amin’ny tsy fanomezan’ny mpamatsy vola ireo volabe nampanantenainy. Efa mandeha ihany koa ny resaka fa takian’ny mpamatsy vola ny tsy hitsabatsabahan’ny vadin’ny filoha amin’ny fitantanana ny firenena sy ny fanilihana ireo tandapa maro malaza amin’ny kolikoly kanefa tsy mbola tanteraka.